446s Ukuzitholela isethi yamazinyo amasha we-lamised (ngamahora amathathu kuphela we-heh) laminate-Edward Avila images and subtitles
Ukudlula Namuhla ~ ~ ~ ~ Izicathulo ezimbili Ngokubambisana noLeo Jay ~! ~ Noma ngubani Guys, wonke umuntu ~ Ngingu-Leo uJ. Funda isiNgisi kulezi zinsuku Ngakho-ke ithoni ifana neRobhothi Ukhathele kakhulu futhi ulele futhi umile ngenxa yokuntuleka kokulala njengamanje. Manje Ngise-dentistry amahora amathathu. 3 amahora Bengicabanga ukuthi kulungile amazinyo ami ?? ㄴㄴ; Amazinyo akho abukeka kahle impela ?? Angishongo ngempela lokho futhi ngithe nje akukubi Uthe uyisigwegwe futhi uphuzi Futhi yini enye oyishilo? Ngithe kubukeka kanjena Kunjalo? Ngithe akwanele phakathi Manje yi-corona Ngakho-ke, ukuzama Umqondo uwukuthi ungakhalela ngamahora amathathu. Kubukeka sengathi kuzothatha amanye amahora amathathu Umtholampilo wamahora angama-3.5 Kepha angazi ukuthi kuzoba nomehluko omkhulu Angifakanga i-pastel lipstick Uma usebenzisa lokhu, amazinyo akho azobukeka aphuzi ngokwengeziwe Haha * Izindebe zeMaybelline * Hahaha Njengebhanana Ubuso nobuso Ngikhombise amazinyo akho Umaphakathi wakho umhlophe ngokulinganayo Ephuzi ekugcineni Ukubhekisisa Okushiwo udokotela Kubukhali impela lapha Futhi umugqa Ayiminyene futhi ayicocekile. Ngakho-ke ngizoyibamba Futhi umbala wamazinyo Okokuqala, ngangicabanga ukuthi kufanele ngigaye wonke amazinyo ami Kepha lapha, kimi Kufana nesipikili se-Dashing Diva. Ngemuva kwesikhashana kancane ngaphandle kwamazinyo Kancane ngaphezulu Esikhundleni sokugqoka i-prosthesis (angikwazi ukukhumbula umqhele) Ngokweqiniso, ngicabanga ukuthi amazinyo aphansi ayinkinga enkulu kunazo zonke Ngiyayibona lapho ngikhuluma Kepha kufanele ngiyilungise? Ah, kubonakala kungalethi i-lip balm Into elungisa amazinyo embozwe uwoyela womswakama ngaphakathi, ngakho ihlala kahle :) (Lokho) * Ijeli le-anesthesia + ngemuva kwe-anesthesia enengxenye Ukubukeka kwami: Imizwa yami: Ngaphambi kwalokhu Futhi lokhu kulandela Kuyesabeka Kuzwakala njenge-mante ye-matte ;; Ngicabanga ukuthi kukhona engingakubeka kukho Kubukeka sengathi wenza ama-prosthetics manje Ngisize kuze kwenziwe ... vele uhlale ... Ngabe kufanele ngiye ekhaya nje? Kepha akuhambanga Khululekile ukwenza noma yini oyenzayo amahora amathathu Hlala emuva endlini yokugcina abantu noma uphume uyothenga noma udle okuthile Kepha i Ngithanda ukulala I-Real Im Ngamanye amagama, amahora angu-3 awedlule Amahora angu-7 edlule Sengibuyile futhi ngizwa okusha !!! Ngizizwa ngicwengekile manje futhi ngicacile Xoxa Yini ehlukile? Sekuyisonto Uzizwe njengami manje? Ngase ngikujwayela Esikhundleni sokuzwa ukuthi kunokuthile emazinyweni akho Ngizozama eminye imikhiqizo yezindebe Ungabona amazinyo ngaphansi Futhi lapho sidingida umkhiqizo wangempela wezindebe Angizange ngihleke kahle. Vele kanjena Ngizothatha umbala oqinile ngibeke okuthile okuxakile lapho Hhayi ngokulandelana okuthile Othandekayo Dalia Bloging Edition Lip Paradise Sheer Dew Tosed Lipstick Umbala ka-Olivia I-K-ubuhle iphishekela inqwaba yabantu Amagama imibala wonke amagama amantombazane amhlophe Noma ngabe kusho ukuthi unjani umbala, angazi ukuthi luvame kangakanani Lapho uya khona U-Olivia UBrenda noma USharot Hawu ... Kugqamile Lolu uhlobo olubizwa ngokuthi iHens Lona ngomunye wemikhiqizo emisha ye-K-ubuhle Lezi zinsuku, abantu abasha bayayithanda Umbala we '' Demand ' Lokhu ukungagculiseki Uyinki okotini obonakalayo Tulips efiphelekile Imibala iyafana. Ekugcineni Asiye kokunye okujabulisayo ngalesi sikhathi. Masenze lokhu uSailor Moon ~! Iqoqo le-Sailor Moon X Colour Pop Umbala we-'Ugigi ' Akunawo umdlavuza ngaphakathi
Ukuzitholela isethi yamazinyo amasha we-lamised (ngamahora amathathu kuphela we-heh) laminate-Edward Avila
< start="0" dur="0.98"> Ukudlula >
< start="0.98" dur="3.72"> Namuhla ~ ~ ~ ~ Izicathulo ezimbili >
< start="5.12" dur="1.7"> Ngokubambisana noLeo Jay ~! ~ >
< start="6.82" dur="1.4"> Noma ngubani >
< start="9.2" dur="1.96"> Guys, wonke umuntu ~ Ngingu-Leo uJ. >
< start="12.86" dur="1.94"> Funda isiNgisi kulezi zinsuku >
< start="14.8" dur="2.24"> Ngakho-ke ithoni ifana neRobhothi >
< start="17.04" dur="4.5"> Ukhathele kakhulu futhi ulele futhi umile ngenxa yokuntuleka kokulala njengamanje. >
< start="21.54" dur="1.18"> Manje >
< start="23.14" dur="1.62"> Ngise-dentistry amahora amathathu. >
< start="27.2" dur="0.76"> 3 amahora >
< start="28.36" dur="1.7"> Bengicabanga ukuthi kulungile amazinyo ami ?? >
< start="38.56" dur="1.68"> Amazinyo akho abukeka kahle impela ?? >
< start="40.24" dur="2.18"> Angishongo ngempela lokho futhi ngithe nje akukubi >
< start="42.42" dur="3.34"> Uthe uyisigwegwe futhi uphuzi >
< start="50.16" dur="2.1"> Futhi yini enye oyishilo? >
< start="53.32" dur="1.2"> Ngithe kubukeka kanjena >
< start="54.52" dur="0.5"> Kunjalo? >
< start="55.02" dur="1.46"> Ngithe akwanele phakathi >
< start="57.9" dur="0.9"> Manje yi-corona >
< start="58.8" dur="1.16"> Ngakho-ke, ukuzama >
< start="59.96" dur="4.72"> Umqondo uwukuthi ungakhalela ngamahora amathathu. >
< start="64.68" dur="1.96"> Kubukeka sengathi kuzothatha amanye amahora amathathu >
< start="69.54" dur="1.86"> Umtholampilo wamahora angama-3.5 >
< start="75.98" dur="3.42"> Kepha angazi ukuthi kuzoba nomehluko omkhulu >
< start="80.96" dur="1.98"> Angifakanga i-pastel lipstick >
< start="85.38" dur="2.46"> Uma usebenzisa lokhu, amazinyo akho azobukeka aphuzi ngokwengeziwe >
< start="102.88" dur="2.18"> * Izindebe zeMaybelline * >
< start="107.12" dur="2.34"> Hahaha Njengebhanana >
< start="109.46" dur="0.96"> Ubuso nobuso >
< start="114.96" dur="0.58"> Ngikhombise amazinyo akho >
< start="117.46" dur="3.28"> Umaphakathi wakho umhlophe ngokulinganayo >
< start="120.74" dur="1.56"> Ephuzi ekugcineni >
< start="139.96" dur="1.32"> Ukubhekisisa >
< start="147.86" dur="1.3"> Okushiwo udokotela >
< start="151.24" dur="1.4"> Kubukhali impela lapha >
< start="152.64" dur="1.94"> Futhi umugqa >
< start="156.06" dur="2.6"> Ayiminyene futhi ayicocekile. >
< start="158.66" dur="1.62"> Ngakho-ke ngizoyibamba >
< start="160.28" dur="2.58"> Futhi umbala wamazinyo >
< start="162.86" dur="6.38"> Okokuqala, ngangicabanga ukuthi kufanele ngigaye wonke amazinyo ami >
< start="169.24" dur="2.16"> Kepha lapha, kimi >
< start="171.4" dur="4.32"> Kufana nesipikili se-Dashing Diva. >
< start="175.72" dur="2.12"> Ngemuva kwesikhashana kancane ngaphandle kwamazinyo >
< start="177.84" dur="1.82"> Kancane ngaphezulu >
< start="179.66" dur="1.7"> Esikhundleni sokugqoka i-prosthesis (angikwazi ukukhumbula umqhele) >
< start="181.36" dur="3.5"> Ngokweqiniso, ngicabanga ukuthi amazinyo aphansi ayinkinga enkulu kunazo zonke >
< start="184.86" dur="2.06"> Ngiyayibona lapho ngikhuluma >
< start="186.92" dur="2.88"> Kepha kufanele ngiyilungise? >
< start="189.8" dur="1.72"> Ah, kubonakala kungalethi i-lip balm >
< start="194.98" dur="2.6"> Into elungisa amazinyo embozwe uwoyela womswakama ngaphakathi, ngakho ihlala kahle :) >
< start="197.58" dur="0.84"> (Lokho) >
< start="204.7" dur="2.84"> * Ijeli le-anesthesia + ngemuva kwe-anesthesia enengxenye >
< start="207.54" dur="1.6"> Ukubukeka kwami: >
< start="209.14" dur="1.64"> Imizwa yami: >
< start="210.78" dur="1.64"> Ngaphambi kwalokhu >
< start="212.86" dur="1.12"> Futhi lokhu kulandela >
< start="214.76" dur="0.88"> Kuyesabeka >
< start="215.64" dur="1.74"> Kuzwakala njenge-mante ye-matte ;; >
< start="217.38" dur="2.06"> Ngicabanga ukuthi kukhona engingakubeka kukho >
< start="220.02" dur="1.94"> Kubukeka sengathi wenza ama-prosthetics manje >
< start="222.52" dur="2.72"> Ngisize kuze kwenziwe ... vele uhlale ... >
< start="225.24" dur="0.94"> Ngabe kufanele ngiye ekhaya nje? >
< start="226.18" dur="2.06"> Kepha akuhambanga >
< start="228.24" dur="2.88"> Khululekile ukwenza noma yini oyenzayo amahora amathathu >
< start="231.12" dur="3.68"> Hlala emuva endlini yokugcina abantu noma uphume uyothenga noma udle okuthile >
< start="234.8" dur="2.64"> Kepha i >
< start="237.44" dur="2.06"> Ngithanda ukulala >
< start="239.5" dur="0.94"> I-Real Im >
< start="250.58" dur="2.32"> Ngamanye amagama, amahora angu-3 awedlule >
< start="252.9" dur="1.98"> Amahora angu-7 edlule >
< start="254.88" dur="3.12"> Sengibuyile futhi ngizwa okusha !!! >
< start="275.68" dur="2.3"> Ngizizwa ngicwengekile manje futhi ngicacile >
< start="299.76" dur="0.62"> Xoxa >
< start="310.02" dur="1.84"> Yini ehlukile? >
< start="312.66" dur="1.12"> Sekuyisonto >
< start="313.78" dur="2.14"> Uzizwe njengami manje? Ngase ngikujwayela >
< start="315.92" dur="2.52"> Esikhundleni sokuzwa ukuthi kunokuthile emazinyweni akho >
< start="318.44" dur="2.06"> Ngizozama eminye imikhiqizo yezindebe >
< start="320.5" dur="2.4"> Ungabona amazinyo ngaphansi >
< start="322.9" dur="2.64"> Futhi lapho sidingida umkhiqizo wangempela wezindebe >
< start="325.54" dur="2.44"> Angizange ngihleke kahle. >
< start="327.98" dur="1.04"> Vele kanjena >
< start="331.58" dur="3.18"> Ngizothatha umbala oqinile ngibeke okuthile okuxakile lapho >
< start="334.76" dur="1.16"> Hhayi ngokulandelana okuthile >
< start="335.92" dur="4.08"> Othandekayo Dalia Bloging Edition Lip Paradise Sheer Dew Tosed Lipstick >
< start="340.6" dur="0.8"> Umbala ka-Olivia >
< start="341.4" dur="2.66"> I-K-ubuhle iphishekela inqwaba yabantu >
< start="344.06" dur="3.66"> Amagama imibala wonke amagama amantombazane amhlophe >
< start="347.72" dur="2.64"> Noma ngabe kusho ukuthi unjani umbala, angazi ukuthi luvame kangakanani >
< start="350.36" dur="0.68"> Lapho uya khona >
< start="351.04" dur="0.62"> U-Olivia >
< start="351.66" dur="0.96"> UBrenda noma >
< start="352.62" dur="1"> USharot >
< start="357.8" dur="1.6"> Hawu ... >
< start="361.08" dur="0.76"> Kugqamile >
< start="372.2" dur="1.66"> Lolu uhlobo olubizwa ngokuthi iHens >
< start="373.86" dur="2.18"> Lona ngomunye wemikhiqizo emisha ye-K-ubuhle >
< start="376.04" dur="2.9"> Lezi zinsuku, abantu abasha bayayithanda >
< start="378.94" dur="2.76"> Umbala we '' Demand ' >
< start="395.2" dur="1.52"> Lokhu ukungagculiseki >
< start="396.72" dur="2.56"> Uyinki okotini obonakalayo >
< start="399.28" dur="2.34"> Tulips efiphelekile >
< start="406.14" dur="1.92"> Imibala iyafana. >
< start="420.9" dur="0.76"> Ekugcineni >
< start="421.66" dur="1.32"> Asiye kokunye okujabulisayo ngalesi sikhathi. >
< start="422.98" dur="1.22"> Masenze lokhu uSailor Moon ~! >
< start="424.2" dur="2.54"> Iqoqo le-Sailor Moon X Colour Pop >
< start="427.44" dur="0.88"> Umbala we-'Ugigi ' >
< start="444.02" dur="1.92"> Akunawo umdlavuza ngaphakathi >